Ukulanda kwamahhala The Best Screen Recorder of 2020 to Record in High Definition
IdathaKit - Ukuqoshwa Kwesikrini
U-downloader mahhala Thuthukisela ku-Pro U-downloader mahhala Thuthukisela ku-Pro
Ukuqoshwa Kwesikrini Sedatha
Ilungele izethulo zevidiyo
Ungaqopha imidlalo ngamafasitela noma ngezindlela zesikrini esigcwele. Futhi, i-DataKit izothuthukisa Ukusabalalisa Komthwalo Womsebenzi phakathi kwe-CPU ne-GPU, iqinisekise ukuthi wena / nePC yakho ingena kahle ngesikhathi sokuqoshwa.
Bamba Ukusakaza Okugcwele
Qopha amavidiyo e-inthanethi noma usakaze bukhoma kusuka ku-YouTube, Netflix, Twitch, Vimeo, DailyMotion, i-Facebook, i-TED, ama-webinars, izinkulumo, izethulo, izingcingo ze-Skype, ukuxoxa nge-TeamViewer, ingqungquthela ye-inthanethi, amavidiyo we-webcam, namanye amasayithi wevidiyo athandwayo kwisikrini esigcwele noma esikrinini esenziwe ngokwezifiso. usayizi.
Yenza tutorials zevidiyo kanye nokubuyekezwa Njenge Pro
Ngemiphumela eminingi yegundane, njengokugqamisa isikhombisi segundane ngosayizi nombala ngokwezifiso, i-DataKit yenza imiyalo yevidiyo yakho, noma ukubuyekezwa kwewebhusayithi / isoftware kubukeka kuhlanzekile futhi kuchwephesha ngokwengeziwe.
Mahhala Khipha ku-internet Manje Thuthukisela ku-Pro Manje
Thuthukisela ku-Pro Manje
Izithombe ezinhle kakhulu ze-DataKit Screen Recorder
* Iphelele i-Twitch streamer, i-Youtubers, ama-gamers kanye nabafundisi, njll.
Iphelele i-Fornite, i-OverWatch neminye imidlalo esheshisa ukuqoshwa
Okukhipha isithombe-esithombeni sevidiyo ngokurekhoda kusuka esikrinini nakwikhamera yewebhu ngasikhathi sinye.
Kuthatha inkumbulo Least
Ngokungafani neminye imikhiqizo efanayo egcina imemori eningi futhi ibangele ukugcwala ngesikhathi sokuqoshwa, i-DataKit Screen Recorder iyindlela yakho engasindi. (Kufika ku-50% ngaphansi)
Iphaneli Yokuhlela Enamandla
Hlela isiqeshana sakho ngamathuluzi ahlukahlukene wokuhlela ngenkathi uqopha.
Lokho okubonayo / okuzwayo yikho okutholayo!
Isilondolozi Sesikrini Sokubuyiselwa Kwe-ScreenKit
Ukukhethwa Kwendawo Eguqukayo
Khetha indawo yesikrini ofuna ukusithatha isithombe-skrini noma uqophe ekucindezelweni kwenkinobho ngemodi eyisithupha ehlukile. (Isikrini esigcwele, isiko, Lungisa isifunda, Cishe igundane, landela igundane, iwindi lokukhiya)
Iphaneli yokudweba yesikhathi sangempela
Dweba umbuthano, Uhlaka, engeza i-Arrows / Umbhalo / Ithuluzi lesinyathelo ngombala wangokwezi nosayizi ku-skrini noma ividiyo yakho ngenkathi uthwebula isithombe.
Faka Imbondela YeWebcam
Dala Amavidiyo Esithombe-Esiyizithombe Ngokuqopha ividiyo ye-webcam kanye nokuqoshwa kwesikrini.
Imiphumela Yegundane Eguqukayo
Ungaqokomisa kalula ukunyakaza kwesikhombisi, engeza umphumela wokuchofoza kwe-Mouse noma ezinye izithombe, Fihla isikhombisi noma izithonjana zedeskithophu, bese ukhubaza isikrini ngenkathi uqopha nge-DataKit Screen Recorder.
Okukhipha ikhwalithi ephezulu ye-MP4, MOV, GIF
Khetha ikhwalithi yevidiyo ekhishwayo, ifomethi yevidiyo nezinga lohlaka njengoba uthanda ngepaneli yokulungiselela esebenza ngokusebenza.
Ukuphuma Kokulahleka kwe-MP3, WMA, M4A, AAC
Capture Umsindo ovela ohlelweni kanye nemakrofoni ngokulandelana noma ngokufanayo. Shintsha ivolumu yemakrofoni kanye nemisindo yohlelo ngaphambi noma ngesikhathi sokuthwebula kwesikrini.
Ngeza i-Watermark kuvidiyo
Faka isithombe sakho se-watermark ekubanjweni kwesikrini.
Ukufinyelela kuwo wonke amavidiyo athungelwe nezikrini ngokushesha.
Imiklamo Eminye Emangalisayo Yobuntu Nemininingwane Enguhlolwayo!
Ukulanda kwamahhala The Best PC Screen Recorder- DataKit Manje!
Mahhala Khipha ku-internet Manje Thuthukisela ku-Pro Manje Thuthukisela ku-Pro Manje Thola Isilingo Samahhala nge-imeyili Yokulanda Kamuva Kukhompyutha
Faka ikheli lakho le-imeyili, Sizokuthumela izixhumanisi zokulanda zemikhiqizo yethu. Note: Umkhiqizo wethu utholakala kuphela kwiWindows naku-Mac OS.